आहा ! लुक्ला (१० तस्विरहरू) - Purbeli News
आहा ! लुक्ला (१० तस्विरहरू)
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १८, २०७६ समय: १७:४७:१८
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हिमालको मुख्य प्रवेशद्वारा लुक्ला आफैमा पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र हो । अनुपम प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण लुक्लाको स्थानीय जीवनशैली, रहनसहन र संस्कृतिसँगै त्यहाँको भौतिक पूर्वाधारले थप सुसज्जित तुल्याएको छ । लुक्ला भन्नासाथ आम मानिसमा त्यहाँको तेञ्जिङ् हिलारी (लुक्ला विमानस्थल) को स्मरण आउँछ । हुन पनि विश्वकै जोखिमयुक्त तर असाध्यै सुन्दर विमानस्थल लुक्ला विमानस्थल पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य पनि हो । आकाशतिर मडारिएको कालो बादलको बाक्लो कुहिरो, हरिया मनमोहक डाँडाकाँडा, तलतिर दूधकोशीको सुशेली महाभारतको छातीमा अडिएको अलिकति समथर भित्तो । त्यसैमा सजिएको छ, लुक्ला विमानस्थल । विमानस्थलको जति आकर्षण छ, त्यति नै स्थानीय बस्ती बजारको सुन्दरता झल्काउँछ ।
विमानस्थलको छेवैमा पङ्तिबद्धजस्तै रहेको चिटिक्क सफा सुन्दर बजार । पासाङ ल्हामु गाउँपालिका वडा नं २ मा पर्ने लुक्ला विशिष्ठ पर्यटकीय क्षेत्र पर्छ । सगरमाथाको काखमा रहेको नाम्चे बजार लुक्लाबाट पदयात्रा गरेर जाँदाको मज्जा शब्दचित्रमा बयान गर्न सकिन्न । लुक्लाबाट एकदेखि दुई दिनको हिँडाइपछि नाम्चो बजार पुगिन्छ । नाम्चेबाट सगरमाथासहितका हिमालको दृश्यावलोकन गर्न पाइन्छ । राजधानी काठमाडौँबाट तारा एयरको विमानबाट करीब ३५ मिनेटको दूरीमा लुक्ला पुगेको ३२ जना पत्रकारको हुल विमानबाट ओर्लेदेखि नै मोबाइल र क्यामेरामा व्यस्त भए । मौसमले साथ लिएकाले पनि उनीहरु सकेसम्म सुन्दर तस्बीर कैद गर्नमा लागे । स्वदेशी तथा विदेशी पत्रकारको ठूलो समूह एकै पटक सायद पहिलो पटक हुनुपर्छ लुक्ला पुगेको । बिबिसिका सिर्जना श्रेष्ठ र एपी न्यूजका उपेन्द्रमान सिंह कस्सिएर क्यामेराको लेन्स तेर्साउँदै भन्नुभयो, “अमेजिङ लुक्ला सुन्दरताको बयान गर्ने शब्दै महङ्गो छ ।”